अनिल मल्लिकलाई पत्नीको नाम थाहा छ तर चिन्दैनन् छापाबाट - Naya Pusta
अनिल मल्लिकलाई पत्नीको नाम थाहा छ तर चिन्दैनन् छापाबाट
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७५ असार १, शुक्रबार ०८:१६
रौतहट–चन्द्रपुर नगरपालिका–८ का अनिल मल्लिकलाई पत्नीको नाम थाहा छ तर चिन्दैनन् । ६ वर्षीय नाबालक अनिलको विवाह भएकै तीन वर्ष बित्यो । पत्नीको नाम पनि अभिभावकले घोकाएर स्मरण भएको हो । उनलाई पत्नी माइतमा छिन् भन्ने पनि अभिभावकले सिकाए । उनी भन्छन्, ‘मेरी पत्नी किरणदेवी हो, उनी माइतमा छिन् ।’
तीन वर्षको हुँदा अभिभावकले पथरा टोलकी किरणसँग उनको विवाह गरिदिएका हुन् । उनका बाबु बुधनले परम्परागत शैलीमा छोराको विवाह गरेको भनी दंग छन् । तर, नाबालकको विवाह किन गरिदिएको भन्ने प्रश्नमा रेडिमेड जवाफ छ– परम्परा !
गरुडा नगरपालिका–५ महमदपुरकी १० वर्षीया सञ्जुदेवीलाई पनि पतिको नाम मात्र थाहा छ । दुई वर्षअघि रुपौलिया गाउँमा विजय मल्लिकसँग उनको विवाह भएको थियो । त्यसपछि पतिको अनुहार नदेखेकी सञ्जु भन्छिन्, ‘केटो कस्तो छ, के गर्छ ? केही थाहा छैन ।’
तराईको सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने डोम जाति सीमित जिल्लामा छन् । परम्परागत रूपमा बाल विवाह गराउने यो जाति राज्यले दिएको नारा विवाहबारी २० वर्षपारि भन्नेसँग बेमतलवी छ, अाजकाे राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फ्रान्सको हिमाल हेर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली एक घण्टा केबलकारमा अड्किएपछि...
शहरुख खान अभिनित फिल्म ‘जिरो’ को ईद बिशेष टिजर सार्वजनिक
ल्यापटप स्लो भइरहेको छ ? यस्तो उपायहरु अपनाउनुस्